Our News Crewसंसारका सबैभन्दा प्रभावशाली सय व्यक्ति ? - Our News Crew
संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली सय व्यक्ति ?
२०७८ भाद्र ३१, बिहीबार १५:४६
संसारका सबैभन्दा प्रभावशाली सय व्यक्तिको सूचीमा अफगानिस्तानका वर्तमान उपप्रधानमन्त्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादरसमेत छन । प्रतिष्ठित पत्रिका टाइम म्यागेजिनले बुधबार २०२१ का सबैभन्दा प्रभावशाली सय व्यक्तिको सूची प्रकाशन गरेको हो ।
सूचीमा चकित पार्ने नामका रुपमा तालिबानका सह–संस्थापक बरादर परेका हुन । तालिबान नेता बरादर अफगानिस्तानमा २० वर्षदेखि चलिरहेको युद्धका निर्विवाद विजेता बन्दै उदाएपछि सुचिमा अटाएका हुन । सन् २०२१ का प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा धेरैजसो पुराना अनुहार दोहरिएका छन् । सूचीमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, राजकुमार ह्यारी र मेघन पनि सामेल छन् ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, इजरायलका प्रधानमन्त्री नेफ्टाली बेनेटको नाम पनि सूचीमा परेको छ । इरानका राष्ट्रपति इब्राहिम रइसी र टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको पनि नाम अटेको छ । सूचिमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी र कोभिसिल्ड खोप निर्माता कम्पनी सिरमका सीईओ अदार पुनावाला पनि परेका छन ।